Yiyiphi i-Confidence Interval?
Okuchanekileyo ngokubala ngokubaluleka kweNgxowa-mali engabonakaliyo yoluntu
Kwizibalo ezingenasiphelo, ukuhamba kwexesha lokuzithemba ngokulinganisa inani labantu lixhomekeke kwisabelo esifanelekileyo sokusabalalisa imilinganiselo engabonakaliyo yoluntu olunikezwe isampuli yesibalo sabemi. Esinye sezizathu zokuba oku kulungelelanisa ubungakanani beesampula, ukusabalalisa okuqhelekileyo kunomsebenzi obalaseleyo ekuqikeleleni ukusabalalisa okungundoqo. Oku kuphawulekayo kuba nangona ukusasazwa kokuqala kuqhubekayo, okwesibini kuyacaca.
Kukho imiba enemiba ekufuneka iqwalaselwe xa kwakhiwa ixesha lokuzithemba ngokweenqanaba. Enye yezinto ezixhalabisa into eyaziwa ngokuba yi-"plus plus" yexesha lokuzithemba, okwenza umqikelelo olinganisiweyo. Nangona kunjalo, eli qi kelelo lendawo engaziwayo lenza ngcono kwezinye iimeko kuneziqikelelo ezingabonakaliyo, ingakumbi kwezo meko apho kungekho mpu melelo okanye i-failure kwi-data.
Kwiimeko ezininzi, inzame ekulinganisela ukulinganisa inani labantu kukusebenzisa isampuli efanayo. Siyicinga ukuba kukho abantu abanomlinganiselo ongaziwayo wabantu bawo abaqulethe uhlobo oluthile, ngoko senza isampula esingahleliyo esicatshulwayo esilinganiselweyo sisuka kulo manani. Kulaba bantu ngabanye, sibala inani labo Yineenkalo esizifuna ngayo. Ngoku siqikelela ukuba sisebenzisa isampuli. Isampula umlinganiselo we- Y / n ngumqikelelo ongenakulungelelaniso we- p .
Ixesha lokusebenzisa i-Interval Four Confidence Interval
Xa sisebenzisa i-interval yexesha eline, sitshintshela umqikelelo we- p . Senza oku ngokukongeza ezine kwi-total number of observations - ngoku kuchaza ibinzana elithi "plus ezine." Sizahlula le mibono emibini phakathi kweempumelelo ezimbini kunye nokuhluleka okubini, oku kuthetha ukuba songeza ezimbini kwiziphumo zeempumelelo.
Isiphumo sokuphela kukuba sitshintsha yonke imeko ye- Y / n kunye ( Y + 2) / ( n + 4), kwaye ngamanye amaxesha eli qhekeza lichazwe yi-tilde ngaphezulu kwalo.
Umlinganiselo wesampula usebenza kakuhle kakhulu ekuqikeleleni inani labantu. Nangona kunjalo, kukho iimeko apho kufuneka sitshintshe umlinganisi wethu. Ukusetyenziswa kwesitatisti kunye ne-mathematical theory ibonisa ukuba ukuguqulwa kwexesha elilodwa lifanelekileyo ukufeza le njongo.
Enye imeko ebangela ukuba siqwalasele i-interval time four is sampled locked. Amaninzi amaninzi, ngenxa yenani labantu elincinci okanye elincinci kakhulu, isilinganiselo sesilinganiselo sisondele kakhulu kwi-0 okanye sisondele kakhulu ku-1. Kulolu hlobo lwesimo, kufuneka sicinge ngexesha elilodwa.
Esinye isizathu sokusebenzisa ixesha elilodwa kunye nexesha elithile ukuba sinesayizi encinane yesampula. Ixesha elidibeneyo kunye nelo xesha linikela ubungakanani obubhekiselele kumlinganiselo wabemi kunokusebenzisa ixesha eliqhelekileyo lokuzithemba.
Imigaqo yokuSebenzisa i-Interval Confidence
Ixesha elilodwa kunye nexesha elithembekileyo lokuzithemba lingumlingo obalaseleyo wokubala izibalo ezingenasisiseko ngokuchanekileyo ekungenikeni kokunye ukujonga okucatshulwa kuyo nayiphi na i-data esetyenzisiweyo-iimpumelelo ezimbini kunye nokungaphumeleli ezimbini-kunako ukuqikelela ngokuchanekileyo inani leenkcukacha ezikhoyo ihambelana neerameters.
Nangona kunjalo, i-inter-four-confidence interval ayikho ngaso sonke isikhathi isebenza kuzo zonke iingxaki; ingasetyenziselwa kuphela xa ixesha lokuzithemba lwedatha liphezulu ngaphezu kwe-90% kwaye ubungakanani besampula kubemi ubuncinane ubuncinane. Nangona kunjalo, isethi yedatha ingaba neyiphi na imiphumo yeempumelelo kunye nokungaphumeleli, nangona isebenza kangcono xa kukho akukho mpu melelo okanye akukho mpazamo kuyo nayiphi na idatha yoluntu.
Gcina ukhumbule ukuba ngokungafani nokubalwa kwamanqaku aqhelekileyo, izibalo zokubalwa kwamanqaku ezincinci zithembele kwisampuli yedatha ukuchonga iziphumo ezininzi phakathi kwabantu. Nangona i-interval yekota yokuzithemba ilungisa i-marginal error of the error, le megali kufuneka isetyenziswe ekuboneleleni ngokubhekiselele kweefatisti.
I-College College (Nebraska) Ukungeniswa
Ukwenza ngokwezifiso i-Motorcycle yakho yaseKlasini